Shuruudaha Guud iyo Shuruudaha Warqadaha | Shuruudaha iyo Shuruudaha | Waraaqaha
Shuruudaha guud iyo shuruudaha
Shuruudaha guud iyo shuruudaha macluumaadka macaamiisha
Baaxadda: Waxaan aqbalnaa dhammaan amarrada iyo qandaraasyada iyadoo la raacayo dalabka gaarka ah ee kuwan soo socda ee guud iyo shuruudo guud iyo dhammaan gaarsiinta iyo adeegyada aan ku bixinno annagoo fulinna amarrada waxay ku saleysan yihiin shuruudahan iyo shuruudahan. Waxaan kaliya oo aan aqoonsaneynaa xaaladahaada isdiidan ama shuruudaha ka leexanaya shuruudaheena guud iyo shuruudaha guud hadii aan si cad u ogolaano ansax ahaantooda qoraal. Macaamiisha ku jira macnaha ereyadan iyo shuruudahan waa kuwa ku jira macnaha 13 BGB. Ganacsadayaasha macnaha shuruudaha iyo shuruudahan waa kuwa ku jira macnaha 14 BGB; qodobada shuruudahan guud iyo shuruudaha ganacsatadu waxay sidoo kale khuseeyaan hay'adaha sharciga ee sharciga dadweynaha iyo lacagaha gaarka ah ee hoos yimaada sharciga dadweynaha.
Macluumaadka macaamilka ee qandaraasyada iibka masaafada iyo siyaasadda joojinta: Markaad alaab ka dalbaneyso internetka / e-mayl / taleefan / warqad / fakis aan ku xirneyn meheraddaada ganacsi ama mid madax bannaan, fadlan sidoo kale la soco macluumaadka soo socda ee sharci ahaan loo baahan yahay:
* Shuruudahayada gaarsiinta waxay khuseeyaan rarka gudaha Jamhuuriyadda Federaalka Jarmalka. Qiimaha badeecada ee aan soo xiganay waxaa ka mid ah canshuuraha.
* Waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad ku bixiso kharashka badeecada aad dalbatay qaansheegad. Faahfaahinta bangigayaga: Fyrst Bank IBAN: DE54 1001 0010 0939 4501 09 BIC: PDNKDEFF. Jeegaga lama aqbalo.
* Amarada ka jira Jarmalka gudaheeda waa bilaash kharashka dhoofinta haddii wadarta guud (qiimaha guud ee amarka laga jaray foojarro la soo furtay iyo qiimo dhimis kale) oo ah 50,00 euro. Haddii wadarta dalabku ka yar tahay 50,00 euro, kharashka dhoofinta ee 3,90 euro ayaa lagaa qaadayaa.
* Lacag caddaan ah oo ku saabsan amarrada dirista, iyadoon loo eegin wadarta guud ee amarka, lacag caddaan ah oo la soo dirayo oo ah EUR 5,60 (oo ka kooban EUR 3,60 lacag caddaan ah oo khidmadda keenista ah iyo khidmadda xawaaladda 2,00).
* Haddii aan si kale loola hadlin macaamilka kahor intaan amarka la saarin, gaarsiinta waxaa la sameyn doonaa saqda dhexe ee maalinta taariikhda dirista. Saxitaanka taariikh hore ee dhalmada waxaa lagu suurta galin karaa iyadoo la bixiyo lacag dheeri ah.
* Waqtiga howsha lagu heshiiyey (muddada udhaxeysa bixinta bixinta ilaa taariikhda keenista) kaliya waxay bilaabmaysaa sida ugu dhakhsaha badan dhammaan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah howsha
Xogta dalabka iyo macluumaadka waxaa soo gudbiyay macmiilka lacagtana waa la helay. Haddii lacag bixinta soo socota dib loo dhigo, qiimo cusub waa in lagu heshiiyaa waana in la caddeeyaa in amarka weli la fulin karo iyo in kale. Dalabkan waxaa loo sameeyay iyadoo lagu saleynayo shuruudaha iyo xaaladaha guud ee nooca ugu dambeeyay
Istaag, waa lagugu soo dhaweynayaa inaad ku daawato kuwan degelkeenna wakhti kasta. Ka dib helitaanka lacag bixinta, waxaad heli doontaa heshiiska qarsoodiga ah ee lagu saxiixayo (waxaa ka mid ah, iyo waxyaabo kale, wareejinta xuquuqda isticmaalka shaqada adiga, waajibaadka shirkadda ee cashuurta lacagta soo socota). Ma ahan mid dhameystiran oo waa inuu dib u eegis ku sameeyaa macmiilku, haddii kale caawinta dhinacyada saddexaad waxay iska dhigeysaa inuu mas'uul ka yahay dacwad oogista. Amarada leh wakhti wax qabad ee kayar 7 maalmood looma fulin karo si tayo leh tayo ahaanna.
* Marka laga hadlayo dalabyada xaddidan, qiimahooda, baaxadda adeegyadooda iyo muddada ay shaqeynayaan waxaa go'aamiya xayeysiisyada u dhigma ee ku jira xayeysiinta.
* Bayaanka ilaalinta xogta ee isticmaalka Google+
Fidinta "google + 1" (Google Plus) ayaa lagu dhex daray websaydhkeenna. Tan waxaa bixiya oo ku shaqeeya Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Mareykanka (hadda kadib: Google). Waxaad ku aqoonsan kartaa badhan astaanta "+1" ee ku taal asalka cad. Markaad booqato degel ku yaal websaydhkeena oo ay ku jiraan wax sidan oo kale ah, biraawsarkaagu wuxuu abuurayaa xiriir toos ah oo ku saabsan server-yada Google, halkaas oo nuxurka koronto-gelinta loogu gudbiyo biraawsarkaaga oo lagu daro websaydhka. Tani waxay u gudbin doontaa macluumaadka aad booqatay degelkeenna Google. Haddii aad gasho koontadaada isticmaale ee shakhsiyadeed ee leh Google Plus ama Google inta aad booqaneyso degelkeenna, Google wuxuu u xilsaari karaa booqashada websaydhka koontadan. Adoo la falgalaya fiilooyinka, tusaale ahaan adigoo gujinaya badhanka ama ka tagaya faallo, macluumaadkan u dhigma waxaa si toos ah loogu gudbiyaa Google oo lagu keydiyaa halkaas. Haddii aad rabto inaad ka hortagto gudbinta macluumaadka noocaas ah, waa inaad ka baxdaa koontadaada Google Plus ama Google ka hor intaadan booqanin degelkeenna. Wax saameyn ah kuma lihin baaxadda iyo waxa ku jira xogta uu Google ku soo ururinayo badhanka. Waxaan u qaadaneynaa in cinwaankaaga IP-ga sidoo kale la duubi doono oo la gudbin doono. Waxaad ka ogaan kartaa ujeeddada, baaxadda iyo isticmaalka xog ururinta shirkadda La socodsii Google Inc. macluumaadkooda ilaalinta xogta. Waxaad ka heli kartaa degelkan URL-ka http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html Xubin Google Plus ah, waad ka hortagi kartaa Google inuu xog kaa qaado adiga markii aad booqato degelkeenna. ku xidhan xogta xubintaada ee ay kaydisay Google haddii aad ka baxdo Google Plus ama Google ka hor intaadan booqan degelkeenna.
* Muddada cabashadu waa 2 toddobaad kadib marka shaqada la dhiibo. Beddel codsiyada la soo gudbiyey ka dib xilligan kama dambaysta ah oo aan khusayn oo aan dib dambe loo sii shaqeyn karin.
* Bayaanka ilaalinta xogta ee kuxiran YouTube-ka
Plugins ka Youtube.de/Youtube.com waxaa loo isticmaalaa boggayaga internetka. Adeegga waxaa ku shaqeeya YouTube, LLC, Cherry Ave., USA - oo uu wakiil ka yahay Google Inc. Haddii aad ku booqato degelkeenna qalab noocan oo kale ah, xiriir la leh server-yada YouTube-ka ayaa la dhisi doonaa iyada oo qalabka la soo bandhigayo lagu soo bandhigi doono websaydhka iyadoo loo sii marinayo farriinta biraawsarkaaga. Tani waxay u gudbin doontaa server-ka YouTube-ka boggooda aad booqatay. Haddii aad ku soo gasho xubin ka mid ah YouTube, YouTube ayaa ku wareejin doonta macluumaadkan koontooyinkaaga isticmaale ee shaqsiyadeed ee barnaamijyadan. Markaad isticmaaleyso qalabkan, sida gujinta / bilowga badhanka fiidiyowga ama dirista faallooyinka, macluumaadkaan waxaa loo qoondeeyay koontadaada isticmaale YouTube, tusaale ahaan, taas oo aad uga hortagi karto oo keliya markaad ka baxdo ka hor intaadan isticmaalin qalabka. Waxaad ka heli kartaa macluumaad ku saabsan ururinta iyo adeegsiga xogta bogga ama fiilooyinka ku jira macluumaadka ilaalinta xogta YouTube: www.youtube.com (
* Fadlan xusuusnow inaadan dhigin shaqadaada maalinta taariikhda gudbinta, laakiin aad dhigato 10 maalmood ama ugu yaraan 2 maalmood kahor taariikhda gudbintaada. Tani waxay ka badbaadineysaa labada dhinac walwal badan. Dabcan, waxaan sidoo kale kuugu soo diri karnaa shaqada si isku xigxiga qiime macquul ah.
* Imtixaannada elektarooniga ah / imtixaannada khadka tooska ah, qoraaga ayaa si adag u ballansan taariikhda. Lacag celinta ayaa suurta gal aheyn hadii taariikhda dib loo dhigo.
Degelkani wuxuu adeegsadaa Hotjar. Bixiyaha waa Hotjar Ltd., Heerka 2, St Julians Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe (websaydhka: https://www.hotjar.com). Waxaan ku soo gabagabeynay heshiis ka baaraandegis amar ah Hotjar si aan u dhaqan galino xeerarka adag ee ilaalinta xogta Yurub. Hotjar waa aalad lagu falanqeeyo hab-dhaqankaaga isticmaale websaydhkayaga. 'Hotjar' waxaan ku duubi karnaa jiirkaaga iyo dhaqdhaqaaqa wareejinta iyo qasabno. Hotjar sidoo kale waxay go'aamin kartaa inta aad la joogtay tilmaamaha jiirka meel cayiman. Macluumaadkan, Hotjar wuxuu ka abuuray waxa loogu yeero khariidadaha kuleylka, taas oo loo isticmaali karo in lagu go'aamiyo aagagga degellada ay doorbidayaan booqdayaasha websaydhka. Waxaan sidoo kale go'aamin karnaa intaad ku sii jirtay bogga iyo goorta aad ka tagtay. Waxaan sidoo kale go'aan ka gaari karnaa xilliga aad baajisay gelitaankaaga foomka xiriirka (waxa loogu yeero funnels-ka). Intaas waxaa sii dheer, Hotjar waxaa loo isticmaali karaa si looga helo jawaab celin toos ah booqdayaasha websaydhka. Shaqadani waxay u adeegtaa hagaajinta dalabyada websaydhada websaydhka. Hotjar waxay isticmaashaa buskudka. Kukiyada waa faylal qoraal yar oo ku kaydsan kumbuyuutarkaaga oo keydiya biraawsarkaaga. Waxay u adeegaan inay ka dhigaan dalabkeenna mid adeegsad-saaxiibtinimo leh, waxtar badan oo ammaan ah. Kukiyadaas waxaa loo isticmaali karaa si gaar ah si loo go'aamiyo in boggeena lagu booqday qalab gaar ah ama haddii howlaha Hotjar la damiyey biraawsarka la sheegayo. Kukiyada Hotjar ayaa ku sii jiraya qalabkaaga illaa aad ka tirtirto.
Waad dejin kartaa biraawsarkaaga si laguu ogeysiiyo ku saabsan dejinta cookies-ka oo kaliya u oggolaato cookies-ka kiisaska shaqsiyadeed, ka-reebitaanka aqbalaadda cookies ee kiisaska qaarkood ama guud ahaan, oo aad dhaqaajiso tirtirka otomaatiga ah ee cookies markii aad xiratid biraawsarka. Haddii cookies-ka la demiyey, shaqeynta websaydhkan waa la xadidi karaa. Isticmaalka Hotjar iyo keydinta kuleylka 'Hotjar' waxay ku saleysan yihiin Qod. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Hawl wadeenka websaydhku wuxuu leeyahay dano sharci ah oo lagu falanqeeyo dabeecadaha isticmaalaha si loo wanaajiyo websaydhkiisa iyo xayeysiiskiisaba. Haddii aad jeceshahay inaad ka jarto ururinta xogta Hotjar, dhagsii xiriiriyaha soo socda oo raac tilmaamaha halkaas ku yaal: https://www.hotjar.com/opt-out. Fadlan la soco in Hotjar ay tahay in si gooni ah loo bakhtiiyo biraawsar kasta ama qalab kasta oo dhamaadka ah. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan Hotjar iyo xogta la soo ururiyay, fadlan tixraac bayaanka ilaalinta xogta ee Hotjar hoosta xiriirka halkan soo socda: https://www.hotjar.com/privacy
* Waqtiyadeenna adeegga ee amarrada jira waa Isniinta ilaa Axadda 9:00 subaxnimo ilaa 18:00 galabnimo.
* Waxaan u baahanahay codsiyo sixitaan ah oo qoraal ah iyo hadal ma aha. Markaa hadaad shaqada heshay oo aad rabto qodob in la saxo, tani waa macquul light qoraal iyo ma hadal ahaan. Wicitaan loo diro maamulaha ayaa ah mid aan micno lahayn markan. U qor emayl kuna qor qodobka si faahfaahsan. . Asalka ayaa ah inay tahay inaan u gudbinno macluumaadka qoraaga isla markaana waaxda tayada ay hubineyso saxitaanka qoraaga iyadoo la raacayo bayaankan: "Hook on it now fits, waxaa hagaajiyay qoraaga."
* Haddii macluumaadka la soo gudbiyo goor dambe, tani waxay si otomaatig ah dib ugu dhigeysaa taariikhda keenista wakhtiga u dhexeeya dhigista amarka iyo waqtiga aan helnay macluumaadka. Qiimaha cusub ee iibka sidoo kale waa in la isku raaco haddii tani ay kordhiso culeyska shaqada fekerkeenna.
* Waxaan kaqeyb qaadanaa barnaamijyada xulufada. Macnaha halkan ku jira, bixiyaha barnaamijka ku xiran wuxuu kaydiyaa haddii aad gujiso xiriiriyaha la kafaala qaaday oo ku yaal boggayaga oo aad ka iibsato shey ama adeeg mid ka mid ah shuraakadayada. Si aad u ilaaliso xogtaada bogagga internetka ee dibedda ah, fadlan la soco bayaanka ilaalinta xogta ee bixiyaha dibadda.
* Dhamaan amarrada waxaa kaliya loogu talagalay inay kaa caawiyaan inaad abuurto shaqo xasaasi ah. Ma ahan mid dhameystiran oo waa inuu dib u eegis ku sameeyaa macmiilku, haddii kale caawinta dhinacyada saddexaad ayaa isaga iska dhigeysa inuu mas'uul ka yahay dacwad oogista. Sababtaas awgeed, cabashooyin lama sameyn doono. Amarada leh wakhti wax qabad ee kayar 7 maalmood ma ahan kuwo gebi ahaanba iyo tayo ahaan macquul ah, ka dib waxaan isku dayeynaa inaan hawsha u hirgalino sida ugu macquulsan.
* Sixitaanada waxaa lagu sameeyaa lacag la'aan iyadoo la keenayo waqtiga 7-21 maalmood kadib ogeysiinta sixitaanka haddii ogeysiiska uu ku jiro muddada cabashada. Haddii codsiyada sixitaanka ay tahay in lagu fuliyo waqti gaarsiin ka yar 21 maalmood, lacag dheeri ah oo ku saabsan sixitaanka waa in lala go'aamiyaa maamulaha oo ay bixiyaan macaamilka. Haddii cabashadu khusayso kororka tayada shaqada oo aan khalad ahayn, tani waa lacag. Qiimaha waa in markaa lala heshiiyo maamulaha oo lagu bixiyo iyadoo la raacayo codsiyada hagaajinta tayada.
* Isticmaalka Google reCaptcha
Si aan uga ilaalino foomka xiriirkeena isticmaalka aan loo baahnayn, waxaan u adeegsanaa adeegga reCaptcha ee ka socda Google Inc. Adeeggan wuxuu awood noo siinayaa inaan kala saarno in soo gelinta ay tahay mid bini aadam ama si aan habbooneyn iyo si otomaatig ah mashiin (spambot) Ujeedadaas awgeed, cinwaankaaga IP-ga iyo wixii macluumaad ah ee kale ee ay u baahan tahay shirkadda Google Inc. ee adeegga reCaptcha waxaa loo gudbin doonaa Google Inc. Qodobada ilaalinta xogta kaladuwan ee Google Inc ayaa lagu dabaqayaa xogtan. Waxaad ka heli kartaa: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.
* Haddii qaab dhismeed uusan cayimin macmiilku, qoraagu wuxuu abuuri doonaa qaab-dhismeed. Isbadal qeyb ahaan ah qaab dhismeedka waa suurtagal, hase yeeshe isbedel dhameystiran oo qaab dhismeedka ah ayaa suuragal ah kaliya lacag dheeraad ah haddii macaamilku uusan jeclayn.
* Waxaan guud ahaan u isticmaalnaa xogta aad bixiso inta lagu gudajiro waajibaadkayaga qandaraaska ama siinta adeega qandaraaska iyadoo la raacayo shuruudaha iyo shuruudaha lagaa aqbali doono adiga iyo macnaha aad bixisay taariikhda, yacni aasaas ahaan kaliya dareenka aad adigu rabto oo aad iska cad , gaar ahaan howsha qandaraaska. Macnaha guud, waxaan si cad u tilmaameynaa in xogtaada loo gudbin doono qandaraaslayaal hoose oo fuliya amarka isgaarsiinta kula orod. Qandaraasleyaashan hoose waxay ku saleysan yihiin EU iyo / ama Switzerland, taas oo hubisa heer ku filan oo ilaalin xogta ah.
* Hababka xigashada waxaa lagu fuliyaa qaabkan soo socda: Xigasho qoraalka hoose z. B.: Eeg Bauer, C. (2018), p. 19 f ama Sida loo soo xigto Harvard z. B.: Sidoo kale [Bauer, 2018] wuxuu leeyahay ... ama Xigasho APA z. B.: Sidoo kale [Bauer, 2018, p. 18] wuxuu leeyahay ...
* Haddii macluumaadkaaga loo gudbiyo shirkado kale ama qandaraaslalayaal, tani waxay ku dhici doontaa oo keliya iyadoo la raacayo xeerarka ilaalinta macluumaadka ee hadda jira iyo in la buuxiyo waajibaadka qandaraaska.
* Haddii lacagta la soo celiyo, lacag bixinta waxaa lagu bixin doonaa dib u dhac 15 maalmood ah ilaa 15 ama 31 ee bisha. Haddii, tusaale ahaan, lacag celin la go'aamiyo July 20.07-keeda, macaamilku wuxuu heli doonaa Agoosto 15.8-keeda ugu dambayn. dib u bixinta Wixii 10.7 ah. dib u bixinta waxay noqon doontaa 31.7/XNUMX siday u kala horreeyaan.
* Waxaan si waadax ah noogu oggol nahay inaan siino dhinacyada saddexaad, tusaale ahaan soosaarayaasha keydka macluumaadka ama adeeg bixiyaasha, xogta loo baahan yahay howlgalka bogga si aan u fulino waajibaadka naga saaran xiriirka isticmaalaha, ama aan u ururinno ugana shaqeyno xogtaan dhinacyada saddexaad. Dadka iyo shirkadaha aan u xilsaaray inay gutaan waajibaadkayaga waxaa ku waajib ah inay u hoggaansamaan qodobadan.
* Bixinta waxay ansax tahay taariikhda dirista ee 0-3 maalmood 2 saacadood kadib helitaanka dalabka. Ama siday u kala horreeyaan 4-8 maalmood 1 maalin, ama 9-15 maalmood 2 maalmood, laga bilaabo 16-31 maalmood 3 maalmood. Soo bandhigida taariikhda dirista ee 32 maalmood iyo in ka badan ayaa dhacaya ka dib 4 maalmood.
* Marka laga hadlayo dalabyada khaladaadka ka imanaya macaamiisha ama annaga, xaq uma laha qiimaha la soo bandhigay / baaxadda adeegyada.
* Marka laga hadlayo macluumaadka / shaqooyinka cusub ama khaladaadka macaamiisha ama anaga, xaq uma laha qiimaha la soo bandhigay.
* Maadaama tani ay tahay shaqo / adeeg shaqsi ahaan loogu sameeyay macaamilka, lama beddeli karo. Asal ahaan, markii amar la bixiyay (qaab wareejin / lacag bixin soo socota), waxaan la galnaa 100% kharashka amarka. Haddii ay dhacdo in lacag celin lagu helo cillad darteed, ugu badnaan 10% kharashyada waa la celin karaa. Qaddarka magdhowgu wuxuu ku xiran yahay darnaanta cilladda. Haddii waqtiga dhalmada uu ka yar yahay 7 maalmood, wax sixitaan ah suuragal kuma aha 7da maalmood gudahood.
* Haddii aan si kale loo codsan / la isku raacin, moodeelkaaga waxaa loo dhiibi doonaa isagoo loo qaabeynayo sida soo socota: Cabbirka Arial cabbirka 12 1.5 kala dheereynta xarig ayaa la caddeyn karaa; 3,5 cm geesooga bidix, midig, sare iyo hoose; Sida loo xigto: qoraalka hoose; Faylka MS Word; Qiyaas ahaan 270 erey (yacni +/- 30 erey) ama kudhowaad. 1800 xaraf (yacni +/- 300 xuruuf) boggii qoraalka joogtada ah. Haddii ay jiraan sawirro waxaa ku yar jilayaasha iyo ereyada bogga; Liisaska bilaashka ah markaad dalbato shey ka badan 5 bog: warqad dabool ah, liistada tirooyin / soo gaabin / jadwallo / waxyaabaha ku jira / buug-gacmeed. Haddii qaabkaaga shaashadda oo leh cabbirka farqiga, farta iyo aagagga bogagga uu ku soo baxo bogag ka yar tirada bogagga la dalbaday, waxaan si farxad leh kuugu soo gaarsiin karnaa bogagga kaa maqan adiga. Si kastaba ha noqotee, waa inaan markaa kugu soo dallacnaa bogaggan. Ma aqbali karno heshiisyo af ama qoraal ah xilligan, maxaa yeelay waxaan haysannaa qiime aad u hooseeya oo bog ah haddii kale ma dabooli karno kharashyada.
* Waxaan xaq u leenahay, ka dib markaad bixiso ogolaanshahaaga, inaan kuu soo dirno war ku saabsan dalabkeena faahfaahinta xiriirka aad soo gashay, ilaa iyo inta aadan si cad uga soo horjeedin adeegsiga xogtaada qoraal.
* Waxaan farta ku fiiqnay inaan kaliya sameysanay sheylo iyo in kuwaas aan loo gudbin karin waxqabad imtixaan. Sababtaas awgeed, cabashooyin lama sameyn doono. Haddii aad wali soo gudbineyso shaxanka aan u sameynay imtixaan ahaan, kuma siin karno dammaanad heer ama damaanad ah inaad ka gudbi doontid - laakiin dabcan waxaan dooneynaa inaan ku siino warqad aqooneed sax ah!
* Marka lagu daro xogta aad siisay daabacaadda, gaar ahaan xogta aad na siisay annaga oo keliya si aan ugu shaqeyno qandaraas ujeedo gudaha ah, waxaan kaliya u soo bandhigi doonnaa dhinacyada saddexaad haddii ay jirto waajibaad sharci oo u dhigma ama ilaalinta danaha sharciga ah.
* Shuruudo sharci awgood, waxaa dhici karta inaan ku qasban nahay inaan keydino xogtaada wixii ka baxsan mudada aad isticmaaleyso degelkeena - gaar ahaan ujeedooyinka canshuuraha. Si kastaba ha noqotee, waxaan waligeen badbaadin doonnaa xogta illaa xadka lagama maarmaanka ah, iyadoo la tixgelinayo qodobbada sharciga ah.
* Maaddaama nooca shirkaddani tahay mid anshax-xumo ah oo aysan ahayn hay'ad sharci ah, macaamilku wuxuu dhaafayaa magdhow wuxuuna dhaafayaa soo celinta lacagaha hordhaca ah.
* Waxaan u adeegsanaa cookies-ka hawlgalka degelkeenna iyo adeegga la bixiyo. Kuwani waa faylal qoraal yar oo ku kaydsan kombuyuutarkaaga.
* Imtixaannada elektarooniga ah / imtixaannada khadka tooska ah, qoraaga ayaa si adag u ballansan taariikhda. Lacag celin laguu soodiro macquul ma ahan hadii taariikhda dib loo dhigo
* Waxaan ku faraxsanahay inaan ku siino adeegyo dheeri ah oo si jaban looga dalban karo si aan u siino macmiil walba shaqsiga uu jeclaan lahaa inuu helo.
* Waxaan isticmaalnaa cookies-ka mar labaad la tirtiro ka dib dhammaadka fadhiga biraawsarka (waxa loo yaqaan 'cookies cookies ID'). Kukiyada waxaa loo isticmaalaa ujeeddada oggolaanshaha, aqoonsiga iyo in la helo macluumaad gaar ah sida macluumaadka haddii aad rabto inaad ku sii jirto. Kukiyada si toos ah ayaa loo tirtiraa 1 saac kadib.
* Waxaan sidoo kale adeegsanaa cookies oo ku keydsan kombuyutarkaaga Ujeeddooyinka xiriirkaSuuq- ama dib u beegsasho. Haddii buskudku ku keydsan yahay kombuyuutarkaaga, adigaa xakameynaya haddii iyo goorta la baabi'inayo cookies-kan. Fadlan u isticmaal hawsha u dhiganta ee biraawsarkaaga tan.
* Waxaan u adeegsanaa tillaabooyin farsamo iyo abaabul si aan u xaqiijino degelladayada iyo nidaamyada la xiriira ka hortagga khasaaraha, baabi'inta, marin u helidda, wax ka beddelka ama faafinta xogtaada dadka aan la oggoleyn.
* Waad dejin kartaa biraawsarkaaga si laguu ogeysiiyo ku saabsan dejinta buskudka, go'aan ka gaarto xaalad-kiis-kiis haddii aad aqbasho iyo in kale. Haddii aadan aqbalin cookies, howlaha shabakadeena waa la xadidi karaa. Fadlan tixraac buuga adeegsadaha biraawsarkaaga ama soo saaraha biraawsarka si aad u ogaato sida barnaamijyada loogu dejiyay si waafaqsan. Caddaynta aqoonsiga, maadaama aan uga baahanahay qaansheegta macaamiisha xafiiska canshuuraha mana sheegi karno macaamiil aan la aqoon. Waxaan jeclaan lahayn inaan tilmaanno in xogtaada shaqsiyadeed la ururin doono laguna keydin doono gabagabada heshiiska amarka iyadoo la raacayo Xeerka Guud ee Ilaalinta Xogta ee 25ka Mey 2018 Qodobka 6 (1) c iyo e GDPR. Waxaa sidoo kale loogu talagalay in lagu hubiyo in aqoonsiga qofka loo hubiyo ujeedada loo baahan yahay ee loogu shaqeynayo. (§ 5 (1) e GDPR.) Macaamilku wuxuu mas'uul ka yahay saxnaanta xogta shaqsiyeed.
Marka loo eego Xeerka Ilaalinta Xogta Guud, Qodobada 13 iyo 14 GDPR, waxaa jira waajibaad in la bixiyo macluumaad, taas oo macnaheedu yahay in macmiil kasta uu heli karo macluumaad ku saabsan xogta la ururiyey laguna baaraandegay codsi. Wuxuu xaq u leeyahay sida ku cad Qodobka 17 GDPR si loo tirtiro xogtiisa shaqsiyadeed ka dib markay u adeegeen ujeedka oo aan mar dambe loo baahnayn. Waxaan xaq u leenahay in aan baarno fal dambiyeedka haddii ay dhacdo in macluumaad shaqsiyeed oo khaldan la bixiyo (cinwaanka emaylka, cinwaanka, iwm.). (§ 263 StGB fraud) Macluumaadka la bixiyo kadib amarka la dhigo ama lacag bixinta lama xisaabtami karo shaqada waana lagu dari karaa shaqada. Haddii xogtan lagu darayo shaqada, amar cusub ama qiimo cusub iyo taariikhda keenista cusub waa in lagu heshiiyo amarka jira.
* Haddii dib u shaqeyntu qaadato wax ka yar 9 maalmood, lacag bixin dheeraad ah ayaa lagama maarmaan ah iyadoo kuxiran culeyska shaqada iyo waqtiga howsha.
* Qandaraaska iibsigu wuxuu dhaqan galayaa marka la bixiyo.
Daahitaan iyo suurtagal la'aan: Haddii adigu, haddii ay dhacdo diidmo ama aan suurtagal ahayn, aad dalbato magdhow halkii aad ka qaban lahayd waxqabadka, annaga nama saarani
Wareejinta halista: Haddii aad tahay macaamil, halista ah shil lumis ama shil xumaanta alaabta waxaa laguu wareejinayaa adiga oo keliya markii alaabta lagugu wareejiyo, xitaa haddii alaabada boostada lagu iibiyo. Haddii aad dalbato ganacsade ahaan, halista ah shil lumis iyo shilalka xumaanta ee alaabta ayaa kugu soo dhaceysa adiga isla marka alaabta lagu wareejiyo shirkadda gaadiidka. Waxay la mid tahay wareejinta haddii aad kujirto aqbalida.
Biilka: Dib-u-dejinta waxaa loo oggol yahay oo keliya sheegashooyin aan muran lahayn ama sharci ahaan lagu aasaasay. Waxaad ku dhaqmi kartaa oo keliya xuquuqda haynta haddii ay ku saleysan tahay isla xiriir qandaraas.
Dammaanad: Mawduuca qandaraaska ayaa si gaar ah u ah alaabta lagu iibiyo guryaha iyo astaamaha iyo sidoo kale ujeedo loogu talagalay iyadoo la raacayo qeexitaanka alaabada. Muddada xaddidan ee sheegashada dammaanadda haddii ay jiraan cillado cilladaysan waa 2 sano laga bilaabo helitaanka alaabta. Haddii aad macaamiil tahay, waxaad marka hore leedahay ikhtiyaarka haddii waxqabadka dheeriga ah lagu fulinayo dayactirka ama beddelka. Si kastaba ha noqotee, waxaan xaq u leenahay inaan diidno nooca waxqabadka dheeriga ah ee la doortay haddii ay macquul tahay oo kali ah kharashyada aan dheellitirka lahayn iyo nooca kale ee waxqabadka dheeriga ah oo aan weli waxyeellooyin weyn kuu lahayn. Haddii waxqabadka dheeriga ahi uu ku guuldareysto ama haddii waqtigii loo qabtay aad dhaaftay natiijo la'aan, mabda 'ahaan, sidaad doonto, waxaad codsan kartaa hoos u dhac ku yimaada qiimaha wax iibsiga (dhimis) ama kansal gareynta heshiiska (ka noqoshada). Ilaa intaad xaq u leedahay magdhawga waxyeelada halkii aad ka qaban lahayd waxqabadka, baaxadiisa waxay ku saleysan tahay sharciyada sharciga ah.
Wax masuuliyad ah looma qaadi karo nuxurka shaqada ama saxnimadiisa. Marka laga reebo tan waa baaxadda (tirada bogagga, ereyada ama jilayaasha). Qoraagu wuu shaqeyn karaa ama qori karaa oo keliya sidoo kale macmiilku wuxuu siiyaa macluumaad iyo tilmaamo. Khatarta kale waxay ku jirtaa macmiilka laftiisa.
Maaddaama dabeecadda shirkaddani tahay mid anshax-xumo ah oo aan ahayn hay'ad sharci ah, macaamilku wuxuu ka dhaafayaa magdhow kasta isagoo diraya codsiga.
Intaas waxaa sii dheer, sheegashooyin dheeri ah, oo laxiriira gaarsiin cilladaysan ama qaldan ama jebinta waajibaadka qandaraaska labaad ee bixinta, iyo masuuliyad kale oo dhankeena ah oo ku saabsan jebinta waajibaadka saaran waa laga saaray, iyadoon loo eegin sababaha sharciga ah ee ay ku saleysan yihiin (tusaale iyo jebinta heshiiska wanaagsan); tani ma khusayso jabinta waajibaadka inta lagu jiro wadahadalada qandaraaska. Ka-saaritaankani ma khuseeyo waxyeellada salka ku haysa ujeedo ama dayacaad weyn oo jebinta qandaraaska qaybteenna ama mid ka mid ah wakiilladayada sharciga ama wakiillada naadiyada, iyo sidoo kale ma aha waxyeellada ka dhalatay dhaawaca nolosha, jidhka ama caafimaadka qofka dhaawaca ah ee aan mas'uul ka nahay. Xaddidnaanta kor ku xusan ee mas'uuliyadda kama saameyn doonto sheegashadaada sida uu qabo Sharciga Mas'uuliyadda Wax soo saarka. Annaga masuul kama nihin alaabooyinka buuxinaya shuruudahaaga gaarka ah, haddii tan tan si cad loogu heshiiyey qoraal ka hor ama aan si cad u oggolaanno. Dammaanad kasta iyo mas'uuliyad ayaa laga reebay cawaaqibka ka dhasha maarayn aan habboonayn, hawlgal aan sax ahayn ama isbeddelo ku yimaada badeecooyinka aad adigu samaysay ama ay dad kale ku sameeyeen magacaaga
Haysashada cinwaanka: Shayga iibku wuxuu ahaanayaa gurigeenna illaa aad ka bixiso qiimaha iibka oo dhammaystiran. Haysashada cinwaanka sidoo kale waxay khuseysaa dhammaan sheegashooyinka aan markii dambe kaa helno adiga ee la xiriira sheyga iibsiga. Inta lagu jiro muddada lahaanshaha lahaanshaha, waxaad xaq u leedahay inaad lahaato oo aad u isticmaasho shayga iibsiga si waafaqsan heshiiska, illaa iyo inta aad u hoggaansameyso waajibaadkaaga inta lagu jiro haysashada lahaanshaha waqtiga habboon. Waxaad xaq u leedahay inaad ka iibiso shayga la iibsanaayo ganacsiga caadiga ah. Horeba hadda waxaad noo xilsaartay dhammaan sheegashooyinka qaddarka qaansheegta dalabkeenna, oo aad ku urursanayso dhinac saddexaad iyada oo loo marayo iibka. Waan aqbalnaa howsha. Shaqada ka dib, waxaa laguu oggol yahay inaad soo qaadato sheegashada. Waxaan xaq u leenahay inaan aruurino sheegashada nafteena isla marka aad ku guuldareysato inaad si sax ah u fuliso waajibaadkaaga lacag bixinta. Daaweynta iyo ka shaqeynta sheyga iibsigu had iyo jeer wuxuu ku dhacayaa magaceena iyo magacayaga. Haddii walxaha la farsameeyo oo aan annaga iska leheyn, waxaan heleynaa wada-lahaanshaha shayga cusub oo u dhigma qiimaha sheyga wax iibsiga ee aan gaarsiinnay walxaha kale ee la farsameeyay. Isla sidaas ayaa lagu dhaqmayaa haddii sheyga iibka lagu qaso waxyaabo kale oo aan annaga ka tirsaneyn. Waxaan qaadnaa inaan sii deyno dammaanadaha aan xaqa u leenahay markaad codsato, iyadoo la oggol yahay in qiimahoodu ka badan yahay sheegashooyinka in lagu hubinayo in ka badan 20%. Waxaa lagugu waajib yeelay inaad na siiso dhammaan macluumaadka loo baahan yahay inta baaxadda daba-galka xuquuqda ka timaadda lahaanshaha lagu heshiiyey. Waxaan xaq u leenahay inaan ka baxno qandaraaska oo aan dalbano soo celinta alaabta haddii ay dhacdo dabeecad adiga kaa soo horjeedda oo ka soo horjeedda heshiiska, gaar ahaan haddii ay dhacdo in bixinta lacagta la bixiyo. Ilaa iyo inta walxaha ku hoos jira sharciga xuquuqda lahaanshaha ay ku jiraan baaxadda gaarsiinta, guud ahaan waxaa lagu siiyay fudud, waara, oo aan la wareejin karin, aan la wareejin karin oo aan loo haysan rukhsad-u-lahaanshaha baaxadda caadiga ah ee badeecadaha, haddii aan si kale loogu sheegin xaaladaha liisanka gaarka u ah badeecadaha.
Ilaalinta xogta; Oggolaanshaha talo, macluumaad (xayeysiin) iyo suuqgeyn: Waxaan xaq u leenahay inaan aruurino, kaydinno oo aan ka baaraandegno macluumaadkaaga shaqsiyeed ee looga baahan yahay macnaha guud ee xiriirka ganacsiga dhexdiisa macnaha sharciga dhowrista xogta federaalka. Intaas waxaa sii dheer, waxaad halkan ka ogolaaneysaa inaan kuu soo dirno macluumaad xayeysiis ah oo ku saabsan iibsashada iyo / ama alaabooyinka kale iyo / ama adeegyada iimaylka cinwaanada aad na siisay. Waxaan si cad u tilmaamaynaa inaad dib ula noqon karto ogolaanshahan waqti kasta oo dhaqan gal u ah mustaqbalka cinwaanada e-mayl ee aad bixisay; tan waxaa lagu sameyn karaa adoo u qoraya cinwaanka lagu siiyay aqoonsiga bixiyaha ama iimayl u diraya info@papernerds.de.
Xeerarka guud: Sharciga Jamhuuriyadda Federaalka Jarmalka; ansaxnimada sharciga iibka ee UN-ka waa laga reebay. Haddii aad tahay ganacsade, hay'ad sharciyeed sharciga dadweynaha ama maalgelin gaar ah oo hoos timaada sharciga dadweynaha, goobta fulinta iyo xukunka qandaraasyada la soo gabagabeeyo oo ay ku jiraan Shuruudaha Guud iyo Xaaladaha Guud waa Stuttgart. Waxtar la'aanta qodobbada shaqsiyadeed ee shuruudaha guud iyo xaaladaha saameyn kuma yeelanayso waxtarka qodobbada haray.
Hawlaheena ganacsi, waxaan u qaadaneynaa in macaamiisheena ay yihiin ganacsato buuxa macnaha HGB. Sidaa darteed waxaan ku xadideynaa qodobbada ugu muhiimsan ee hoose. Haddii shuruudahaaga iyo shuruudahaagu ka leexdaan kaayaga, taada ayaa kaliya lagu dabaqayaa haddii si cad loo xaqiijiyay.
Caddaynta Ilaalinta Xogta ee loo adeegsado Google Analytics
Websaydhkani wuxuu adeegsadaa Google Analytics, oo ah adeeg falanqeyn webka ah oo ka socda Google Inc. ("Google"). Google Analytics waxay isticmaashaa waxa loogu yeero "cookies", faylalka qoraalka ee ku kaydsan kombuyutarkaaga isla markaana kuu sahlaya isticmaalkaaga bogga in la falanqeeyo. Macluumaadka ay soo saartay cookie-ka ee ku saabsan isticmaalka degelkan waxaa badanaa loo wareejiyaa server-ka Google ee ku yaal Mareykanka oo halkaas ayaa lagu keydiyaa. Si kastaba ha noqotee, haddii qarsoodiga IP-ga laga hawlgeliyo websaydhkan, cinwaankaaga IP-ga waxaa hore u soo gaabin doona Google gudaheeda waddamada xubnaha ka ah Midowga Yurub ama gobollada kale ee qandaraaska la galay heshiiska ku saabsan Aagga Dhaqaalaha Yurub. Cinwaanka IP-ga oo buuxa waxaa kaliya loogu gudbiyaa server-ka Google ee USA waxaana lagu soo gaabiyey halkaas xaalado aan caadi ahayn. Aniga oo ku hadlaya magaca hawl wadeenka degelkan, Google waxay u adeegsan doontaa macluumaadkan si ay u qiimeyso isticmaalkaaga websaydhka, si ay u soo uruuriso warbixinnada ku saabsan waxqabadka websaydhka iyo inay u siiso hawlwadeenka websaydhada adeegyo kale oo la xidhiidha waxqabadka websaydhka iyo isticmaalka internetka. Gudaha
Cinwaanka IP-ga ee uu gudbiyo biraawsarkaaga oo qayb ka ah Google Analytics laguma biiri doono xogta kale ee Google. Waad ka hortagi kartaa keydinta buskudka adigoo dejinaya softiweerka biraawsarkaaga si waafaqsan; si kastaba ha noqotee, waxaan jeclaan lahayn inaan tilmaanno in xaaladdan laga yaabo inaadan awoodin inaad adeegsato dhammaan howlaha websaydhkan illaa inta ay ka buuxaan. Intaas waxaa sii dheer, waad duubi kartaa xogta ay soo saartay cookie-ka oo la xiriirta adeegsiga websaydhka (oo ay ku jiraan cinwaankaaga IP-ga) Google iyo ka shaqaynta xogtan Google
adoo soo degsanaya oo ku rakibaya furaha furaha waxaad ka heli kartaa cinwaanka soo socda: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Waad iska qori kartaa joornaalkayaga. Si tan loo sameeyo, waa inaad ku dhawaaqdaa oggolaanshaha ilaalinta macluumaadka soo socda: "Waxaan jeclaan lahaa inaan ku biiro warsidaha (ka noqo xubin kasta oo ka mid noqoshada wakhti kasta). Waan ogolahay in xogteyda loo adeegsado ujeedadan. ama tirtirida xogtaan. Fadlan la soco, si kastaba ha noqotee, inaan guud ahaan heyno kaliya xogta aad si iskood ah noogu soo gudbisay si kasta.
Waxaan u adeegsanaa tillaabooyin farsamo iyo abaabul si aan u sugno bogaggayaga internetka iyo nidaamyada la xiriira ka hortagga khasaaraha, baabi'inta, marin u helidda, wax ka beddelka ama qaybinta macluumaadkaaga ee dadka aan la oggolaan. haddii aad la wadaagto kombiyuutarka dadka kale si looga hortago in si xun u isticmaalka akoonkaaga. Waad soo booqan kartaa degelkeenna adigoon bixin wax macluumaad ah oo adiga kugu saabsan. Intii lagu guda jiray booqashada websaydhka fudud, waxaan ku badbaadinnaa xogta helitaanka iyada oo la tixraacayo waxa loogu yeero faylasha log server. Kuwani waa xog uu biraawsarkaagu diyaariyo oo aan shakhsi ahayn, kuwaas oo ah:
Nooca biraawsarka / nooca, nidaamka hawlgalka la isticmaalay, tixraacaha URL (bogga hore loo booqday), magaca martigeliyaha kombiyuutarka marin u helka (cinwaanka IP), waqtiga iyo taariikhda codsiga serverka. Xogtan uma xilsaari karno dad gaar ah. Xogtaan kuma biirin ilaha xogta kale; xogta sidoo kale waa la tirtiraa ka dib falanqaynta tirakoobka.
BGB waxay khuseysaa dhammaan ganacsatada aan diiwaangashanayn macnaha HGB.
Dalabyadayagu waa kuwo aan khasab ahayn. Xaqiijinta dalabkeena qoran, oo waliba lagu soo diri karo emayl ama fakis, ayaa go'aan ku leh aqbalida qandaraaska iyo baaxadda gaarsiinta. Haddii xaqiijinta amarkayagu ka kooban yahay weecasho amarka macaamilka, macaamilka waxaa loo haystaa inuu oggolaaday leexashooyinka haddii aanan helin ogeysiis iska hor imanaya 5 maalmood gudahood laga soo bilaabo taariikhda la soo saaray amarkeenna.
Qiimaheena waxay kujiraan euro oo lagu daray canshuurta qiimaha sharciga lagu daray, hadii aan si kale loogu sheegin cadeynta dalabkeena.
Haddii qodobada Shuruudaha iyo Xaaladaha Guud ay noqdaan kuwo aan waxtar lahayn ama aan la dhaqan gelin karin, ansax ahaanshaha Shuruudaha guud iyo Xaaladahaas saameyn kuma yeelan doono. Dhinacyada qandaraasyada ayaa markaa waajib ku ah inay wada shaqeeyaan si loogu beddelo qodobbada aan waxtarka lahayn ama aan la fulin karin iyadoo lagu beddelayo qodobo wax ku ool ah oo la fulin karo oo ku soo dhowaanaya sida ugu macquulsan qodobbada shuruudahan.
Dhammaan alaabooyinka la geeyo waxay ku xiran yihiin lahaanshaha cinwaanka.
Waxaan kaliya ku bixinnaa adeegyo la-talin macnaha BGB. Waxaan u xaqiijineynaa macaamiisheenna inaan kaliya shaqaaleysiineyno shaqaale aqoonyahanno aqoon leh oo leh tababarka takhasuska leh ee lagama maarmaanka ah si loo hubiyo tayada ugu sarreysa ee adeegyadeenna. Ma aqbalno dammaanad dheeraad ah.
Markii la dhaqan galiyo shuruudahan iyo shuruudahan, dhammaan shuruudaha iyo xaaladaha horay loo daabacay waxay noqonayaan kuwo aan ansax ahayn.
Wadada Birch 24